Ezombusazwe, ngezindinganiso olwamukelwa, - ingcolile, olunzima futhi oyingozi. Ngakho-ke, lapho zikhishwa yibandla abesifazane, kuyacaca ngokuthi azimisele ngezinga elingakanani abantu okungavamile. Lithuanian uMongameli Namuhla uyagijima izwe lakhe ukuba athathe ihlandla lesibili, futhi kunamathuba hhayi kuphela izimfanelo luyingxenye isifazane, futhi sishukumiseleka ukuba aqaphele izimbangi zawo ezingahlangani kakhulu kwezepolitiki.
Emazweni ukuthi uzibuse ngemva kokuwa sondo Soviet, ikakhulukazi aseBaltic, i-career kwanoma iyiphi sezombusazwe kuhlaba inhlekelele ngisho uxhumano kokukude kuya izakhiwo amandla umbuso zamaKhomanisi. Ukuze kuqedwe nesitha emzabalazweni, kwanele umbe encwadini yomlando wakhe - bakhe noma rodstvennikov- ngisho isu ukubambisana neziphathimandla. Zonke kakhulu isikhathi eside i- "umsebenzi eSoviet" ukugwema ngokuphelele ukuxhumana nge izakhiwo efanayo yokwakha ama-career kwanoma iyiphi amayunithi isikali kuhlulekile.
Ukuzinza, esesikhundleni uMongameli samanje Lithuania Dalia Grybauskaite, kuhle kakhulu kusukela lo mbono, ngoba wazalelwa amalungu omkhaya ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe, balwa engabandlululi Soviet, futhi ngemva kokukhonza omunye neminyango isifunda NKVD. Polikarpas Vladovich Grybauskas, owazalwa ngo-1928, efana Veterans abaningi kulo lonke Union, ukuze weminyaka engu lama-40 Ukunqoba waklonyeliswa Order of the Patriotic iMpi Yezwe II degree.
Indodakazi abaphezulu esasile uthi ubaba wakhe umshayeli kuphela umnyango umlilo, futhi akuphelanga ingxenye esebenzayo ezingxabanweni noma ukucindezelwa nezitha umbuso zamaKhomanisi. Iphuzu omuhle esimweni esinjalo licacile: uMongameli samanje Lithuania akukaze azikutholi renunciation zomphakathi lomzali.
Isibonelo umsebenzi wokuziphilisa omuhle kusukela eSoviet Union
Unina - Vitaly P. Gribauskene - kwaba oqeqeshiwe umdayisi, wazala indodakazi entwasahlobo ka-1956. Dahl kuphothula esikoleni esiphakeme e Vilnius ngaphandle kukhanye kakhulu bewathanda basketball, okuyinto kubhekwa cishe umdlalo kazwelonke eLithuania. Ngemva kokuqeda isikole, wasebenza ezinye umhloli isikhathi uMnyango kaZwelonke Philharmonic Uhlaka futhi zayiswa Leningrad, lapho wakwazi ukubhalisa Zhdanov State University.
Wafunda eMnyangweni ntambama Faculty of Political Umnotho, futhi ntambama wasebenza njengoba umsizi laboratory ku noboya endaweni yokukhanda. Laboratory umsizi kwakubhekwa njengesibusiso umsebenzi abasebenza akuphathelananga imikhawulo yokwemukela party, njengoba kwaba njalo endabeni ka-the stratum obuhlakani nomphakathi wamaSoviet, ngakho ngo-1983, unyaka iziqu, owayezoba umongameli Lithuania waba yilungu leQembu LamaKhomanisi. Lokhu kwaba yisici esibalulekile kuyashesha nge-career kwi- iyiphi inkundla.
PhD e Umnotho Political
Kusukela ngo-1983, iminyaka eyisikhombisa Grybauskaite wafundisa ezomnotho ezombusazwe ngaleso Higher Party School e Vilnius, walivikela ngo-1988 PhD mqondo iziqu ngesikhathi Academy of Social Sciences of the CPSU Central Committee eMoscow. Impumelelo enjalo ngaphandle ukukhuthazela, amandla nokuzimisela ngisho ezikhathini yokujama tsi sikhuntile kwakungenakwenzeka. Nonrandom kubonakala enye Ezemidlalo Dali - karate - umthombo naluvalo, ukuzethemba nesivinini yokusabela.
Akungabazeki ukuthi uma Party yayisalokhu iqembu yedwa futhi babuse izwe elikhulu, umongameli wamanje Lithuania Usufike amazinga ophezulu impela we nomenklatura party at the kazwelonke noma ngisho ezingeni zonke-Union - ngakho lolungenamaphutsa savela umsebenzi wakhe wezombusazwe ne "Okwenzayo umbuso". Kodwa Union iwa, iCommunist Party of Lithuania yahlukana noprofesa Vilnius HPS Dalia Grybauskaite ngo-1990 wasala engasenabo umsebenzi.
A orbit entsha
Kakade wacosha isivinini missile ballistic ayikwazi wabuyela starting emgodini - ngakho-ke kwakunzima ukumisa umsebenzi we umholi wesikhathi esizayo Lithuania. I yisandla ngoba steel wakhe ngaphandle Izimfanelo eziyingqayizivele siqu, ulwazi umxhwele emkhakheni amakhono umnotho futhi olunye ulimi.
Eqiniseka ngesiNgisi Grybauskaite uye baziswa Algirdas Brazauskas - namuhla kuba owayengumongameli naseLithuania, yabe isazi sezombusazwe, iqala kuphela ukwakha elite izisebenzi ngoba uvuselela lizwe. Ngo-1991, Grybauskaitė eya ukuqeqeshwa United States eGeorgetown University Institute of International Economic Relations.
Ohlakaniphile, isikhonzi, uKhomishana we-European
Ngokushesha Grybauskaite - professional wezomnotho kwezombangazwe sezenhlalo - futhi baba uchwepheshe izinqubo ezenzeka emnothweni isicebi, ikakhulukazi emkhakheni ukuxhumana phakathi kwamazwe ahlukene. Kusukela ngo-1991 kuya ku-2004, wayemhlonipha izikhundla eziphezulu kuleli izakhiwo European futhi kuhulumeni Lithuania:
Umqondisi eMnyangweni European Ministry of International Economic Relations;
UNgqongqoshe Plenipotentiary we Embassy of Lithuania e-United States;
Vice-ngemvume kaNgqongqoshe wezimali;
Vice-Minister of Foreign Affairs,
UNgqongqoshe Wezezimali yaseLithuania;
UKhomishane waseYurophu u for Budget and Ukuhlelwa kwezezimali.
Ukuze somgomo wokusetshenziswa kwezilimi eziningi kuba ngempela ifinyeleleke futhi okuthunyelwe eliphakeme kwamandla esiphezulu kuleli zwe - umongameli Lithuania. Biography of the nembangi kungena ehhovisi ngo-2009, Grybauskaite kwakucishe lengenamaphutsa nokuthi kwaba a ngomusa blonde, kungase ube isici ezengeziwe ukunqoba kwako, nakuba phakathi 7 ukhetho, ngaphandle uDali kwakukhona abesifazane ababili - ngakho uye wafumana kakhudlwana futhi emncintiswaneni ubuhle.
Ukhetho yahanjelwa kancane ezingaphezu kwesigamu lwabavoti, kodwa umphumela Grybauskaite - ukunqoba e umzuliswano wokuqala nge Inkomba 68,2% - the best Lithuania ngoba ngaso sonke isikhathi post-Soviet.
Ukhetho ukunqoba ngemva kweminyaka emine wanikezwa nzima. Ngo ngomzuliswano wokuqala ayengakwazi ukuqoqa ezingaphezu kwesigamu amavoti, ngenkathi yesibili indiva Social Democrat Balcytis 17%. Noma kunjalo, ngo-July 12, 2014, waphinde uthethe ehhovisi lakhe eliphezulu. On lokho kusekelwe impumelelo yayo?
ekahle lakhe kwezombusazwe, abize lo "Iron Lady" - uMargaret Thatcher. Nakuba izinga impumelelo yabo kuze kube manje kunzima ukuqhathanisa, uDalia Grybauskaite izimisele ukuba izimiso edume kunazo owesifazane sezombusazwe. Imibhikisho izimbangi zawo e Lithuania bheka "ukukhuluma abantu abampofu?" Nokho kukhona umfanekiso omuhle kakhulu izindlela zalo.
Kusolakala ukuthi ukunqoba okhethweni ka 2014 Lwenziwe ngenxa ukufinyelela isivumelwano zabaholi bamaqembu aphikisayo Lithuanian ukuze abanikeze izikhundla okuqinile kuhulumeni futhi izakhiwo European, lapho abona abangazange balithole. Umzamo kuqhunyiswa nehlazo ngenxa incoherence lwamanye isizinda Grybauskaite (kukhulunywa ngalo ukuqeqeshwa kwakhe ezikhungweni avaliwe, i-KGB, yokuvikela abophiko lwezokuphepha kuzo zonke izigaba career yakhe) kuhlulekile ngenxa ukucwaninga esiqinile yi izakhiwo kamongameli Lithuania.
Iqiniso ukuthi kakade iminyaka eminingi (manje 8) - uMongameli Lithuania, "sola" ngolwazi lwakhe ngayiphi indlela olusezandleni kwezinsimbi zomculo eyinhloko osopolitiki esikhaleni elaliyiSoviet. Chief phakathi kwabo - ubiza zokunqoba ifa elisindayo lamaKhomanisi ezomnotho nezombusazwe, kuya ingrowth we united Europe, nokugcinwa njengezwe.
Fighter ngokumelene "expansionism Russian"
Kusukela isiqubulo olusha kuyimpumelelo, "usongo Russian": umongameli we Lithuania manje iyahola emzabalazweni kumelwene nombuso "ubudlova imperial" eRussia. ukwamukelwa Grybauskaite engumakhelwane isimo njengoba "amaphekula", kwathiwa impi evulekile emhlabeni khulula, isimemezelo umfundi Putin ezithembekile eyamlandela wezenzo kukaStalin kubonakale kakhulu, ngisho nabaphikisi onzima nokuqinisa umsebenzi eRussia eYurophu nasemhlabeni jikelele.
Kunzima ukusho ukuthi lezi izitatimende ngaphezulu - izinkolelo zomuntu siqu noma ezombusazwe okumsulwa futhi ngayiphi injongo yabo, kodwa omunye impumelelo - UMengameli wase-Lithuanian ukubukeka owesifazane uzilungise sika, bhekana ngempumelelo isikhathi, has emadwaleni igunya egwadle phakathi amagquma ezithambile kwezombangazwe European.
Izwe, njengenjwayelo, akukho ukuvumelana ...
"Yena oshade Lithuania" - a Clumsy, kusukela iphuzu Ngenxa isiRashiya, isisho isifakwe ku kwegazi omunye abeluleki uyise eliqhuba ngentando yeningi entsha Lithuanian Vytautas Landsbergis - Ramunas Bogdanasom. "Emsebenzini, umsebenzi kanye nomsebenzi futhi" - ngakho uthanda ukuphendula imibuzo emayelana izinto zokuzilibazisa Dalia Grybauskaite. ukuphila komuntu uMongameli ngaphansi isivikelo kusukela ukuphrinta kanye netinsita letisebentisa gezi lamadigri yellowness obuhlukahlukene. Bazama ukuthuthukisa isihloko orientation wakhe ngokocansi (okuyinto Grybauskaite ophika), kodwa kungcono ukuba Europe ukubekezela isithwathwa ungazange "ibhomu".
Elandisa ukuthi ingubani le nqubomgomo emibuthanweni ezahlukene subjectively kuyaqondakala, kodwa umbuzo ukungabikho umndeni nezingane mayelana nendlela imihlatshelo kudingekile ukuze uphumelele kusho inzuzo emkhakheni sezombangazwe owesifazane ihlanganyela IMIBONO zefilosofi kabanzi mayelana nenjabulo ekuphileni, futhi ngokuvamile njengoba nje ayinakho izixazululo kungacacile. Kuyinto Eqinisweni obungenakuphikwa bokuba khona abe semqoka kangaka uhlukile ngezindlela eziningi, njengoba uMongameli Lithuania Dalia Grybauskaite, ongazange izwi lokugcina wathi.